Ny eigday Heating dia mametraka birao any New York …….
Manambara i Shenzhen Eigday Heating Limited manomboka ny sampana vaovao any New York, Etazonia, mifanaraka amin'ny soatoavin'ny orinasa, "fanavaozana mitohy sy famoronana lanja". Ity dingana ity dia natomboka tamin'ny paikadin'ny orinasa, izay mikendry ny hanitatra ny bus eo an-toerana sy iraisam-pirenena ...
Inona avy ireo vokatra azo hafanaina amin'ny bateria
Ny vokatra azo avy amin'ny bateria dia afaka manafana ny vatanao amin'ny andro mangatsiaka. Saika ny vokatra fanafan'i SAVIOR dia mandeha amin'ny bateria ary azo averina indray, ary ny hafanana dia azo ovaina amin'ny hafanana tonga lafatra amin'ny alàlan'ny bokotra switch. Ahoana no fiasan'ny vokatra azo hafanaina? Misy karazany maro ary st ...
Miasa fonon-tanana vita amin'ny fanafanana
Tsara raha mividy fonon-tànana mafana ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany na mitaingina moto amin'ny andro mangatsiaka. Fa ilaina ve ny fonon-tànana mafana? Ireo mpividy izay nividy fonon-tànana fanafanana dia samy manana ny heviny momba izany. Ny ady hevitra lehibe indrindra dia ny tsy fahaizan'ny hafanana mandritra ny tontolo andro ary ny fiakaran'ny hafanana dia tsy mitovy f ...